अपाङगता भएकी सम्झनाको आईसोलेसन र क्वारेन्टाइनको कथा - Radio Bihani
आज: | Thu, 25, Feb, 2021
अपाङगता भएकी सम्झनाको आईसोलेसन र क्वारेन्टाइनको कथा
२९ माघ २०७७, बिहीबार १२:२१
धादिङ,२९ माघ ।
विस्तारै डाँडा पारिबाट घाँम डुब्दै थियो । मेरो मोबाईल र हातले सम्झना रिजाल नाम गरेको व्यक्तिलाई फोन लगाउदै थिए । मैले नत उहाँलाई चिनेको नै थिए नत देखेको नै । बस यत्ति मात्रै थाहा थियो कि उहाँ एक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो र उहाँलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । उहाँलाई भेट्न जानु अघि मेरो मनमा कतै मै पो संक्रमित छु कि? अथवा मलाई पनि सर्ने त होईन? भन्ने अनेकौ प्रश्न उब्जिरहेको थियो । तर पनि मनमा एक विश्वासका साथ उहाँ बस्ने कोठामा गएँ । उहाँको काँखमा सानी एक छोरी थिईन् ।
घाँमको डुबुल्कीसँगै हामीबीच कुराकानी सुरु भयो । मैले प्रश्न गर्न नभ्याउदै उहाँले भन्नुभयो “मैले आफू कोरोना संक्रमित हुँदा भोगेको त्यो पीडा सम्झिदा अझै पनि आँखा बाट आँसु खस्छ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा गत असोज २८ गते एकैदिन ९७ जनामा कोरोना भाईरस पुष्टि भयो । त्यसअघि असोज २७ गते नीलकण्ठ नगरपालिकामा १ सय ७३ संक्रमित पुगिसकेको थियो । त्यत्ति धेरै संक्रमितहरु मध्येकी एक संक्रमित थिईन २३ वर्षीय सम्झना रिजाल ।
उहाँ शारीरिक रुपमा अपाङगता हुनुहुन्छ । उहाँ ९ महिनाको हुँदा उहाँमा पोलियो देखियो । विस्तारै विस्तारै उहाँको एउटा खुट्टाले काम गर्न छोड्यो । उपचारको लागि धेरै अस्पताल पनि धाउनु भयो । त्यस समयदेखि अहिले सम्म निरन्तर रुपमा चेकजाँच गरेर औषधि खादै आईरहहेको सम्झना रिजाल बताउनु हुन्छ । हुन त कोभिड १९ को महामारी फैलिएको पनि लगभग लगभग एक वर्ष हुनै लाग्यो तर अझै पनि खुलेआम भएर हिड्न सक्ने अबस्था भने अझै छैन ।
उनी शिक्षिका पनि हुन् । उनको पनि पिसिआर परीक्षण गरियो । गत असोज २८ गते सम्झनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट साँझ ६ बजेतिर आयो । उनी शारीरिक रुपमा अपाङगता भएकोले एउटै आधार थियो आफ्नो श्रीमान् । श्रीमानको पनि पिसिआर परीक्षण गरियो । श्रीमान्को पनि कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । आँखाभरी आसु टिल्पिलाउदै सम्झना भन्छिन् “एकअर्काको आधार रहेका श्रीमान श्रीमती दुबैको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको खबर सुन्दा म निशब्द भएँ ।” उहाँको २ वर्षको सानो छोरी छिन् । दुबै जना संक्रमित हँदा छोरीलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने चिन्ताले मन पोलिरहेको थियो ।
जब हामी दुबै श्रीमान श्रीमतीलाई कोरोना पुष्टि भएको थाहा भयो त्यसपछि ओल्लोपल्लो कोठका छिमेकीहरुले तुच्छ व्यवहार देखाउन थाले । मलिनो स्वरमा सम्झना भन्छिन् “पल्लो कोठामा बस्ने दाइ रक्सी खाएर आउनु भएको रहेछ । आउने वित्तिकै हामीलाई तिमीहरु निस्किहाल हामीलाई पनि रोग सार्छौ तिमिहरुले, कि त हामी निस्किन्छौं भनेर भन्नु भयो ।” कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट र छिमेकीको तुच्छ व्यवहारले रात छिप्पेको पनि पत्तै भएन सम्झनालाई । काँखको सानो बच्चा च्यापेर कहाँ जाने मध्यरातमा ? त्यो रात छटपटीमा नै बित्यो सम्झनाको । उनको माईती पुच्छारबजार हो । ती बितेका कुरालाई सम्झिदै भन्छिन् “बिहान ५ बजे उठेर माईतीमा बच्चा छाडी नीलकण्ठ नगरपालिकाले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बनाएको आईसोलेसनमा गयौं ।”
आँखा बाट बग्दै गरेको आँसु पुच्छ््दै भनिन् “रातभरिको अनिदो र चिन्ताले गर्दा खुट्टाले पनि पाईला चाल्न हार मानिसकेको थियो । बल्लतल्ल आट गरेरै भए पनि पाईला बढाएँ । बाटोमा कतिपयले हामीलाई मान्छे मारेर नै आएको जस्तो व्यवहार देखाए । ”
जुन व्यवहारले गर्दा अझै पनि आफूले मानसिक समस्या झेलिरहेको रिजाल बताउनु हुन्छ । आईसोलेसनमा त पुगिन् तर अपाङगता भएका व्यक्तिको लागि नत आईसोलेशन अपाङगता मैत्री थियो न त सौचालय नै । खानेपानीदेखि लिएर सबै आफै गर्नुपर्ने थियो । खुट्टाले नसक्दा नसक्दै पनि तल्लो तलाबाट माथिल्लो तल्लासम्म काँधमा जारको पानी बोकेर ल्याउनु परेको सम्झना बताउछिन् । १० दिनसम्म आईसोलेसनको कष्ठकर जीवन कटाएर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सम्झना घर फर्किईन् । उनी भन्छिन् “सरकारले बनाएको आईसोलेसनमा गएर बस्दा केही सेवा सुविधा पाईएला भनेर गएको तर त्यहाँ त कसैको साहारा नपाईने रहेछ । सबै आईसोलेसनहरु अपाङगता मैत्री नहुँदा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको लागि क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन निकै कष्ठकर हुने सम्झनाको भनाई छ । आफुले भोगेका ती तिता पलहरुलाई केलाउदै अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहले चासो दिए यस्तो कष्ठकर जीवन जिउन नपर्ने सम्झना बताउछिन् ।
सिद्धलेक ३ सलाङ बसन्तमा वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता जारी
नेकपा ओली समूहका खनियाबास गाउँकमिटी सचिव सुके गुरुङ प्रचण्ड नेपाल समूहमा
सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै धादिङबेशीमा विजय र्‍याली(अडियो सहित)
कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका धादिङका सञ्चारकर्मीहरु सम्मानित
२० औँ मजदुर बलिदान दिवस तथा अभिनन्दन कार्यक्रम जोगिमारा धादिङमा सम्पन्न
धादिङमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक सार्वजनिक
सर्वोच्चद्धारा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको पक्षमा फैसला, धादिङ सहित देशैभर दिव प्रज्ज्वलन
धादिङ जिल्ला स्तरीय टि २० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि धादिङ समाज धादिङलाई
धादिङ जिल्ला स्तरीय टि २० क्रिकेट प्रतियोगितामा धादिङ समाज धादिङ र त्रिपुरासुन्दरी फाइनल प्रवेश
धादिङका सञ्चारकर्मीहरुका लागि मानव बेचविखन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम
ब्लड क्यान्सरका बिरामी सूर्यान्स सुनारलाई न्यू धादिङ बोर्डिङद्धारा आर्थिक सहयोग
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धादिङ जिल्ला शाखाको ३४ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
विशालटारमा जिल्ला स्तरीय टि २० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु, बैरेनी र त्रिपुरासुन्दरीको बिजयी सुरुवात
धादिङको पाल्पा भञ्ज्याङमा बस दुर्घटना हुदाँँ ८ जना घाईते
धादिङको गजुरी बजारमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ६२ जनाले गरे रक्तदान
वरिष्ठ साहित्यकार ब्रदीप्रसाद दाहालको छन्दकविता सङग्रह र निबन्ध सङग्रह विमोचन
बिमा गर्ने नौलो शैली, धादिङकी सरिता मग्रातीद्धारा दाइजोमा १० लाख ४० हजारको बिमा उपहार
धुवाकोटमा बृहत ल्होछार सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ५ को सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
पिसोन कपडा बैंकद्धारा बेनिघाट रोराङ ९ ऐबाङका चेपाङ समुदायलाई न्यानो कपडा वितरण
धादिङ रिचोकटारका आशिष प्रजा कक्षा १२ को परीक्षामा चेपाङ समुदायबाट उत्कृष्ठ
सुनगाभा एकेडेमीका विद्यार्थीहरुले गरे शहिदहरुको सम्झना
भौगोलिक रुपमा विकट रहेको सुन्दर वस्ती गंगाजमुना २ तावलमा बस सेवा सुरु